भारतीय संचारको दाबी – नेपालले रातारात सीमाका पिलर गायव बनायो « Media for all across the globe
भारतीय संचारको दाबी – नेपालले रातारात सीमाका पिलर गायव बनायो
बिएल नेपाली र नेपाल न्यूज दैनिकको सहकार्यमा
नेपाली राजनीतिक पार्टीको एकता र भारतप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरूपता आएसँगै भारतीय राजनीतिक वृत र सञ्चार जगतको नेपालबारे अफवाह फैलाउने शैली फेरिएको छ।
नेपालको निशानछाप प्रतिनिधिसभाबाटभारी मतले पारितभएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले केही समयदेखि फैलाएका गलत सन्देशहरू एकाएक मेटिन थालेका छन्।
केही दिनअघि संसदको कार्यसूचीबाट हटाइँदा भारतीय मिडियाले नेपाल पछि हटेको र नेपाली कांग्रेस संसोधनको पक्षमा नरहेको समाचार दिएका थिए। अहिले काठमाडौंमा युवाहरुले गरिरहेको प्रदर्शनलाई पनि केही मिडियाले अपव्याख्या गरिरहेका छन्।
अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउने बहस पुनः सतहमा आएपछि – भारतीय सञ्चार माध्यम, कुटनीतिक विज्ञ, पूर्वप्रशासक र राजनीतिज्ञलगायतले नेपालमाथि निरन्तर झुटा प्रचार गरिरहेका छन्।
चीनसँगको भारतीय चिसो सम्बन्धलाई लिएर उनीहरूले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासलाई चिनीयाँ चासोका रूपमा समेत लिएका छन्।
खासगरी भारत–चीन सम्बन्ध राम्रो छैन। उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रिएकै कारण, नेपालको पछिल्लो बहसलाई पनि चिनियाँ चालका अनुमान गर्दै गलत प्रचारबाजीमा उत्रिएका हुन्। नेपालमाथिको बिना तथ्यको आरोपहरू भारतले अझै थोपर्न छोडेको छैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट विचारधाराले उतैतिर तानेको भारतीय पंक्तिको बुझाई छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निडर र हक्की नेताका रूपमा भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गर्दैगर्दा ‘नेपाली कम्युनिष्ट र चिनियाँ कम्युनिष्ट मिले’समेत भन्न छोडेका छैनन्।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा बहस चर्चापछि, यसलाई भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको आन्तरिक राजनीतिक रस्सा–कस्सीका कारण राष्ट्रवादको नारा अघि सारेको बताउँथे। बिस्तारै, नेपाली कांग्रेसको सर्मथनले भारतीय चिन्तनलाई धक्का दियो र भारतले नेपालको आधारहिन दाबी भन्दै बहसलाई तोडमोडगर्न थाल्यो।
पछिल्लो समय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सन्दर्भमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एक देखिएपछि भारत थप अफवाहका मसला खोज्दै छ।
संयोगले नेपाल–भारत सीमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट भारतीय नागरिकको मृत्युलाई थप गलत प्रचार गरियो। ‘खेतमा काम गरिरहेका भारतीय नागरिकलाई नेपाली सैनिकले अन्धाधुन्ध फायरिङगर्दा मृत्यु’ जस्ता समाचार प्रकाशित भए। तर, वास्तविकता फरक छ।
भारत र नेपाल सीमा विवाद जारी रहेका बेला, सीमानाका पिलरहरू नेपाली सुरक्षाकर्मीले गायव गराएको भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले समाचार छापेको छ। नेपालले नयाँ पाँच सीमा नाका खोलेको र त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल राखेको उल्लेख गरेको छ। नेपालले सीमानामा उच्च सतर्कता र गस्तीसमेत बढाइएको भनेको छ।
अचम्म त यो छ, सीमा स्तम्भ हराएका, अतिक्रमण बढेको वर्षौदेखि नेपालले पढेका समाचार आजकाल भारतीयले पढिरहेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम यतिसम्म झुटा समाचार दिइरहेका छन् कि, सीमानामा नेपालभन्दा भारतीय सुरक्षा फौजको राम्रो सहभागिता छ। युपीको लखीपुरमा भारतीय एसएसबीको ३५औं बटालियन तैनाथ छ। यसले ६३ किलोमिटर नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण गरिरहेको छ। तर, नेपालपक्षबाट सीमा स्तम्भ गायब गराएको र भूमि अतिक्रमणसमेत बढाएको एसएसबी प्रमुख मुन्ना सिंहले डीएमलाई पत्र लेखेको समाचारसमेत भारतीय मिडियामा छाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न भारतसँग सीमा विवाद उत्पन्न गरेको न्यूज १८ ले समाचार लेखेको छ। समाचार अनुसार भारतको बिहार राज्यका सबै सीमा नाकालाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ।
यद्यपी दुई देशबीच मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि वार्ता गर्नुको कुनै विकल्प नभरहेको अमर उजलाले समाचार लेखेको छ।
ओली सरकारले राष्ट्रियताको नाममा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विवादित नक्सा संसदको तल्लो सदनबाट जारी गरेको गलत विश्लेषण गरेको छ। घरेलु राजनीति, चीनको कडा आर्थिक सहयोग र भारतबाट सन्तुष्ट नभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम लिएको उसको सार छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सम्वन्धलाई आधारभूतरुपमै परिवर्तन गर्न खोजेको बुझाइ भारतमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
‘ओलीले दुईपटक भारतको चाहनाविपरीत चुनाव जिते। उनी अहिले नेपालमा राष्ट्रवादको मानक बनेका छन्। सीमा विवादलाई पनि उनले चतुरतापूर्वक अघि बढाइरहेका छन्,’ टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ।
यसैगरी, ‘द हिन्दू’ ले नेपालले ‘नयाँ नक्शाको संसोधन अनुमोदन’ गर्यो भन्दै लामो समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा भारतीय पक्षबाट कसैको भनाइ समावेश छैन। नेपालका पूर्वविदेशमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको भनाइ समावेश छ। उनले भनेका छन्, ‘दुई देशको सीमा विवाद अब निकै पेचिलो भनेको छ। किनभने, हाम्रो संविधानमा गरिएको प्रवन्धलाई लिएर अर्को देशसँग कुनै सम्झौता गर्ने अधिकार अधिकारीहरुस्ँग छैन।
हिन्दूस्तान टाइम्सले चाहिँ नेपालले आफ्नो नक्शा ‘तोडमोड गरेको’ र यसलाई भारतले मान्यता नदिने भन्दै समाचार कभरेज गरेको छ। यो समाचारले पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई बढि महत्व दिएको छ। भारत चीनसँग सीमा विवादमा उल्झिरहेको बेला नेपालसित तनाव बढाउनु नहुनेमा विज्ञहरुले जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सूदले दुबै पक्षले सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनेतर्फ लाग्न आग्रह गरेका छन्। पूर्वराजदूत सूदले एक मराठी पत्रिकासँग अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो बताएका हुन्। ‘हाम्रो चीनसँग सीमा विवाद छ। सेना आमने सामने छन्। पाकिस्तानसँग पनि विवाद छ। गोलीबारी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालसँगको सीमा विवाद हामी गर्न खोजिरहेका छौं। जब दुई देशबीचको सीमा पूर्ण खुला छ। दुवै देशका मानिसहरूमा बेलायतीकालदेखि आवतजावतमा कुनै रोकावट छैन,’ उनले भनेका छन्।
नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी, वि. सं. २०१८ सालसम्म लिम्पियाधुरामा रहेका नेपालीले तिरो तिरेको रसिद, भारतीय राजपत्रमै उल्लेख भएका तथ्यलगायतका आधारमा नेपालले आफ्नो पूर्ण सीमासहितको नक्सा जारी गर्दै निशान छापसमेत संशोधन गरेको हो।